Okpukpo Okpukpo Okpukpo Umu Ozo Na-ekpo Ekpo China Manufacturer
Nkọwa:Njikwa na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ,Enwere ike ọkụ ọkụ,Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ na Control Panel
Home > Ngwaahịa > Egwuregwu ndị na-ekpo ọkụ > Ihe nkiri na-ekpo ọkụ maka ngwa ngwa > Okpukpo Okpukpo Okpukpo Umu Ozo Na-ekpo Ekpo
Nweta ihe ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ iji gbochie ụkwụ oyi na-eme. Ụkwụ gị ga -eme ka obi dị gị ụtọ .
Ọkụ dị ọkụ dị ọkụ bụ naanị ihe dị gị mkpa iji mee ka oyi na-atụ n'oge oyi a-na-eme ka ụkwụ gị dị ọkụ n'ejighị ọkụ ma mee ka ọ bụrụ ajirija. Ọ bụ ụzọ kachasị mma iji mee ka ụkwụ gị na-ekpo ọkụ mgbe ị na-anụ nnukwu ụlọ. Insoles kpụ ọkụ n'ọnụ na- enye ọbụna nkasi obi ma dịkwuo ala karịa nke Original Heated Insoles, na-eji ihe ngwangwa polyurethane na-agbanwe ihe, ihe nchekwa mkpuchi batrị dị jụụ, na batrị nwere ike iwepụ.
3 MGBE A GA-ECHI ỌTỤRỤ: ọkụ ọkụ anyị na-ekpo ọkụ nwere nchịkwa 3 nchịkwa nhọrọ nyere gị ọkwa nke okpukpu atọ.Ọ na-ekpo ọkụ chaa chaa chaa chaa chaa na kpo oku.
Kpoo ọkụ ọkụ maka footwarmer Kpọtụrụ ugbu a
Njikwa na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ Enwere ike ọkụ ọkụ Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ na Control Panel Ngwá na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ Na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ Nkume Na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ Nọgide na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ Onye na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ